Dzimwe Nyowani Google Mepu Mamaki | Martech Zone
Svondo, Gunyana 2, 2007 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Ndiri kupedzisa mepu saiti yemutengi muvhiki ino uye ndafunga iyo yazvino mamaki (icon) kuunganidzwa kunze uko kwaive kwakajeka pachena, kushaya chero divi. Ndichiri kuzorora, ndakafunga kuita mutsva muunganidzwa. Inzwa wakasununguka download mamaki pano uye ushandise kushambadzira kana isiri-yekutengesa mashandisirwo… yangu chete chinodikanwa chakanaka ndatenda!
Kune museve une mumvuri, isina chiratidzo, mamaki 0 ​​kusvika 9 uye A kuburikidza naZ.
Tags: google Mapmamaki
AT & T: Kutengesa Kwakakwana kunoteverwa Nenjodzi Dhirivhari
Ndira 29, 2008 na4: 30 PM
hesi, ndatenda nekundirega nditore mifananidzo yako uye ndishandise mune yangu purojekiti murume. Mufaro,
nzira yekuenda nemifananidzo iyi, ivo vakapinza kwazvo. Kutenda nekuvaburitsa.
Apr 3, 2008 pa 4: 40 AM
yanga ichitsvaga kwese kwese museve wakasvibira wakasvibirira, asi handina kuiwana.
tnx kwauri ndinogona kuiisa mu 😀
Apr 6, 2008 pa 2: 28 AM
ndatenda nekundirega nditore mifananidzo.
Apr 7, 2008 pa 9: 24 PM
Zvakaitwa! Kutenda nekuita kuti mifananidzo yako iwanikwe kuruzhinji.
Apr 12, 2008 pa 7: 46 PM
Ndatenda nemifananidzo !! Ivo vakuru!
Jun 11, 2008 pa 4: 17 PM
Hei ndatenda nekuisa izvi pawebhu kuti vamwe vatore! Dai vamwe vangatevedzera muenzaniso wako!
Jul 11, 2008 na4: 20 PM
Mhoroi ini ndinogona kushandisa yako isina kunyorwa mamaki icon yemamepu akagadzirwa neyangu chirongwa gpsdings (http://gpstools.sf.net).
Jul 11, 2008 na5: 06 PM
Hukuru! Ndiri kufara izvi kuti dzakakurumbira!
Aug 11, 2008 na5: 56 PM
Ndatenda Douglas, izvi zvinobatsira kwazvo uye nekutenda nekuvapa ivo kuti vashandise vasina tambo!
Aug 11, 2008 na6: 15 PM
Iwe unotengesa, Mike! Zvimwe zvinouya!
Sep 6, 2008 pa 3: 07 AM
Ndiri kutsvaga rudzi urwu rwemakero asi ini ndinozviisa sei mumepu yangu yeGoogle? Pane nzira yekuisa mukati mangu ikon asi ini ndinofanirwa kurodha pasi faira pawebhu zvakananga kuGoogle mepu rinotaridzika. Kwete pro sezvaunganzwisisa asi ini ndinoda kushanda pamepu dzangu!
Gumiguru 28, 2008 pa 9:45 AM
Thanks mumwe wako !! Preaty zvakaitwa zvakanaka !!
Dec 9, 2008 pa 5: 05 AM
Ndira 30, 2009 na4: 51 PM
Ndine yako kofi 😀
Ndatenda zvikuru nekuda kwemifananidzo. Yakachengetedza yakawanda yenguva yekutenda kwauri.
Mar 25, 2009 pa 2: 52 AM
Ndatenda kwazvo mafonti :)
Apr 6, 2009 pa 5: 41 PM
Kutenda mamaki. Ndiri kushandisa seletion yeyako tsvuku kubvumidza iko kuungana kwekucherechedzwa kwekuona mhuka dzesango mumakore maviri apfuura. Ini (nyore) ndakashandura ruvara kuti ndigadzire imwe inoenderana iyo yandiri kushandisa pakuongorora kwemhuka dzesango kwakaitika kutanga kupfuura makore maviri.
Sekurudziro iwe unogona zvakare kuve nemaki ane zvimwe zviratidzo ( - - * #? . : ) uye dzakasiyana shadings. Hei kunyange mitsetse inogona kuitika!
Apr 13, 2009 pa 5: 44 PM
Aya mamaki ari kunyatsotaridzika zvakanaka. kuvonga nekuvagovana.
Apr 23, 2009 pa 5: 20 AM
Basa guru. Kutenda nekugovana !!!
Sep 13, 2009 na11: 44 PM
Ndatenda Douglas, pane zvakanaka chete!
Sep 15, 2009 pa 10: 11 AM
Kutenda nekugovana Douglas!
Gumiguru 13, 2009 na3: 01 PM
Ndiri kutaura newe nekuti ini ndiri mugadziri we "Mepu mifananidzo muunganidzwa", uye ndakafunga kuti ungafarire kutaura nezve chirongwa changu mu blog rako.
Mepu mifananidzo yekuunganidza ipakeji mazana matatu emahara emahara ezviratidzo zvako. Unogona kuzviisa nemaoko muGoogle Mepu yako ne "Mepu dzangu", kana otomatiki neGoogle Mepu API
Yakarongedzwa muzvikamu zvemavara, iwe unowana muunganidzwa wakazara wemifananidzo, senge sinema, chikoro, bhangi, yekuJapan yekudyira uye chitoro chembatya.
Ona mamwe ese ma icon pano: http://code.google.com/p/google-maps-icons/